VANOGARAMO 980 780 095
VAPARIDZI 4 034 693
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 4 339 285
Nherera Dzinopinda Misangano
Angela, uyo anogara kuSuriname, akashanyira nzvimbo inochengeterwa nherera iri pedyo nepaanogara. Mukuru wepo aiva imwe hanzvadzi yainge isingachaiti basa, saka yakapa Angela mvumo yekuparidzira vana vacho. Angela akataura nevana 85 ndokuvaratidza mavhidhiyo epajw.org. Zvadaro, akabva atanga kudzidza nevakawanda vavo. Mamwe mapiyona maviri akabatana naye, mumwe nemumwe achidzidza neboka rake. Hanzvadzi yainge isingachaiti basa yakati yainge yadzidzisa vana vacho nziyo dziri murimwe remabhuku edu enziyo uye yaivaverengera nyaya dzemuBhaibheri manheru. Yakataura kuti yaida kupinda misangano, asi yaisakwanisa kusiya vana vari vega ipapo. Pakupedzisira, pakazoitwa urongwa hwekuti vose vauye kuImba yeUmambo. Sezvo kubva panzvimbo yacho kuenda kuImba yeUmambo pachifambika netsoka, hama dzaivaperekedza. Iye zvino hanzvadzi yacho nevana vese 85 vanogara vachipinda misangano.
Gabriel Akabatsira Sekuru Vake
Paraguay: Gabriel achitaura nasekuru vake
Paaiva munzira kuenda kumba achibva kugungano muParaguay, Gabriel ane makore 6 akafungisisa nezvekukosha kwekuparidza mashoko eUmambo. Akabva afunga kuti pane mumwe munhu waaida kuzova naye muParadhiso—sekuru vake. Asi sekuru vake havana kumbobvira varatidza kufarira chokwadi uye vaitopikisa mudzimai wavo nevana, avo vaiva Zvapupu.
Musi iwoyo, Gabriel akakumbira vabereki vake kuti vafonere sekuru naambuya vake vanogara kuArgentina, kuti ataure navo vachionana pavhidhiyo. Gabriel akatsanangurira sekuru vake zvakakoshera kudzidza Bhaibheri ndokuvabvunza achiti, “Sekuru, munoda here kudzidza neni?” Sekuru vake vakabvuma. Gabriel akati vaigona kudzidza vese bhurocha rinonzi Teerera Mwari Urarame Nokusingaperi. Vakadzidza vese bhurocha racho kwemwedzi mishoma yakatevera. Sezvo vese vaisakwanisa kuverenga zvakanaka, mumwe nemumwe wavo aifanodzidzira vasati vadzidza. Pese pavaidzidza, Gabriel ainge akagadzirira chidzidzo chacho uye aipfeka sheti netayi.
Sekuru naambuya vake vakazoshanyira mhuri yavanaGabriel kwemavhiki mashoma. Pavainge vari ikoko, sekuru vake vakapinda misangano nemhuri yacho. Sekuru vaGabriel pavakazodzokera kuArgentina, vakaramba vachidzidza Bhaibheri neimwe hama yeko uye vafambira mberi kusvika pakuva muparidzi asina kubhabhatidzwa. Iye zvino sekuru naambuya vaGabriel vanonyengetera pamwe chete mazuva ose. Gabriel afambirawo mberi. Avawo muparidzi asina kubhabhatidzwa. Sekuru vake vakati vanoda kuratidza kuzvitsaurira kwavo kuna Jehovha nekubhabhatidzwa.
“Hazvina Kungoitika Zvega Kuti Mundishanyire”
KuBrazil, imwe hanzvadzi inonzi Jennifer payaipa vanhu turakiti rinonzi Chokwadi Vakafa Vangararamazve Here?, yakagogodza padhoo remumwe mukadzi aimhanya-mhanya kuti aende kumariro eshamwari yake. Jennifer akamuudza kuti zvangoitikawo kuti anga achida kumupa turakiti rinotaura nezvetariro yekuzoona hama neshamwari dzedu dzakafa dzichiraramazve. Mukadzi wacho paakanzwa musoro weturakiti racho akamboti shamisikei kwekanguva ndokuzorigamuchira. Paakabvunzwa kuti angada here kutora mamwe maturakiti kuti aendeserewo mhuri yainge yafirwa, mukadzi wacho akabvuma ndokukumbira kuti apiwe mamwe 9.
Jennifer akazoshanyirazve mukadzi wacho, uyo akamuudza kuti: “Musi uya patakatanga kuonana, ndakazoona kuti hazvina kungoitika zvega kuti mundishanyire. Mwari ndiye akakutumai nemashoko anonyaradza andaida chaizvo.” Mukadzi uyu akanga apa vamwe maturakiti acho ese. Mumwe wemumhuri yakanga yafirwa, uyo akapa mharidzo yemariro acho, akaverenga turakiti racho rese zvinonzwika. Munhu wese aivapo akafarira zvakaverengwa ndokutenda mukadzi wacho nemashoko iwayo anonyaradza. Mukadzi wacho akabvuma kudzidza Bhaibheri.
Vashandi vatatu vepaBheteri reHaiti vakanga vari parwendo nemuchovha unonzi tap-tap. Vari parwendo rwavo rwemaawa maviri nehafu, vakataura nevamwe nezvetariro yeUmambo, uye vakapa vanhu magazini 50 nematurakiti 30. Mumwe wavo anonzi Gurvitch, akaverengera mumwe aivamo chikamu chemagazini yeMukai! Mukomana anonzi Pépé aiteerera uye akakurumidza kupindawo munyaya yacho. Akakumbira kudzidza Bhaibheri, uye sezvineiwo aigara mundima yeungano yaGurvitch. Kubva muna January 2014 paakatanga kudzidza, Pépé ari kupinda misangano yese nemagungano ese. Anoudza vamwe zvaava kutenda uye anotarisira kuva muparidzi asina kubhabhatidzwa nekukurumidza.